कर्णाली बिहार बन्ने त होइन ? access_timeअसार १३, २०७९
हेरी क्यामले भनेका छन्, ‘गरिब त्यो होइन, जोसँग पैसा छैन । गरिब त्यो हो, जो–सँग सपना छैन ।’ हामी कर्णालीबासी सपना नभएर नै गरिब भएका हौं । संसारका विपन्न मुलुक सपना भएर नै सम्पन्न भएका हुन् । तसर्थ कर्णाली समृद्धिको सपना हामीले देख्नै पर्दछ । ...
बुद्धको ‘ह्यापिनेस फर्मुला’ : यस्ता छन् मनलाई सशक्त बनाउने सात अभ्यास access_timeअसार १३, २०७९
धेरैजसो धर्मग्रन्थहरू ‘ईश्वर’ शब्दबाट सुरु हुन्छन् । बौद्ध धर्मको सारग्रन्थ धर्मपद भने ‘मन’ शब्दबाट सुरु हुन्छ । बुद्धले बारम्बार एउटै कुरा दोहर्याएका छन्– मन नै प्रधान हो । त्यसैले, मनलाई प्रशिक्षित गर । धर्मपदमा भनिएको छ– प्रशिक्षित गरिएको...
प्रहरीको बढुवा : सरकारको इच्छाबमोजिम कि कानुनअनुसार ? access_timeअसार ९, २०७९
नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्राचीन कालदेखि नै अनेकन नामबाट प्रहरीको अस्तित्व विद्यमान थियो, जसले राज्यको तर्फबाट नागरिकको सुरक्षा गर्ने कार्य गर्दथे । २००८ सालमा वैधानिक रूपमा प्रहरी फोर्सको स्थापना भएको पाइन्छ । प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि २०१२ सालमा प्रह...
कसले हिर्काइरहेछ महँगीको मुङ्ग्रो ? access_timeअसार ९, २०७९
‘महँगी नियन्त्रण सरकारको हातमा छैन,’ यो भनाइ हो सरकारका प्रवक्ता अर्थात् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको । असार ७ गते मन्त्री कार्कीले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । मन्त्री कार्कीका अनुसार विशेषतः पछिल्लो समय हप्तैपिच्छे भाउ बढाइएक...
वाक् स्वतन्त्रता र वाक् मर्यादा एक सिक्काका दुई पाटा access_timeअसार ९, २०७९
वाक् स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ । स्वतन्त्रताको महत्त्व त्यसको उपयोग गर्न नपाएका मानिसले व्यक्त गर्ने पीडामा भेटिन्छ । मेरो कलम नभाँच, मेरो बोल्ने मुख नथुन, मेरो हात गोडामा नेल नठोक भन्ने बीपी कोइरालाका समकालीन सबै कम्युनिस्ट, काँग्रेस र २०४६ सम्मको स्थिति बेह...
योग दिवसको सन्देश : खै त जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ? access_timeअसार ७, २०७९
यस वर्ष पनि २१ जुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रुपमा हामीले मनाइरहेका छौं । संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरुले आ–आफ्नै ढंगले यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउँदै आइरहेका छन् । यस पटक मनाइने योग दिवस आठौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो । विश्वव्यापी रुपमा योग प्रतिको...
शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि योग access_timeअसार ७, २०७९
आध्यात्मिक परिभाषाअनुसार मन र आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने क्रियालाई योग भनिन्छ । शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा शान्त र आध्यात्मिक रूपमा उच्च चेतनायुक्त भएर जिउने कलालाई पनि योग भनिन्छ । संस्कृत भाषामा योगलाई जोड्नु भन्ने बुझिन्छ । योग नेपालको हिमालय क्षेत्रम...
राजनीतिक ध्रुवीकरणको औचित्य र आवश्यकता access_timeअसार ७, २०७९
के नेपाली राजनीति सरल रेखामा अघि बढिरहेको छ ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा आम नेपाली मतदाताहरूको मनभित्र के कुराहरू खेलिरहेका छन् ? राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मनस्थिति कस्तो छ ? दलीय सिद्धान्त, ब्यवहार, सँगठन र दल...
बालेन र विकास: 'बियर खाउँ, पानी जोगाउँ !' access_timeअसार ७, २०७९
ठमेलको एउटा रेष्टुराँमा प्रचार सामाग्री टाँसिएको रहेछ- बीयर खाऊँ,पानी जोगाउँ। तथानामका विकास एवं विभिन्न खाले संरक्षण अभियान यथा-पर्यावरण, पृथ्वी, जल, भूमि, माटो आदिको लागि भइरहेका पश्चिमा निर्दिष्ट एनजीओ, आईएनजीओ मोडेलको यथार्थ चित्रण गर्छ उक्त रेष्...
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस र मानसाग्नि मिसन access_timeअसार ७, २०७९
विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि असार ७ गते ‘मानवताका लागि योग’ नाराका साथ आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस संसारभर मनाउने कार्यक्रम छ । प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आइरहेको यो दिवसको इतिहास र त्यसका मुख्य योगदानकर्ताका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । कुनै पनि महान् व्यक्त...
सुरक्षित यात्राको अधिकार : न्यायालयको उपहास र निकम्मा सरकार access_timeअसार ६, २०७९
२०३५ साल अगाडिसम्म नेपालमा गाडी दुर्घटना हुँदासमेत छानविन समिति बन्थ्यो, त्यसले सुझाव सहितको रिपोर्ट दिन्थ्यो भन्ने सुन्नमा आउँछ । रिपोर्ट कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि नाइँ त्यो दैवले नै जानून् । तर अहिले सार्वजनिक यातायात र निजी यातायातका साधनको पनि दुर्घटनापछि छानविन ...
युक्रेनको बाटोमा नेपाल ! access_timeअसार ५, २०७९
अमेरिका र रुस बिचको अन्तरविरोध नयाँ होइन । यो तात्कालीन सोभियत समाजवादी जनगणतन्त्र संघ अस्तित्वमा रहँदादेखि नै जारी विवाद हो । अर्थात् यो पुँजीवादी र समाजवादी धुरी बिचको लडाई थियो । यस अतिरिक्त यो विश्व महाशक्ति राष्ट्र वन्ने होडवाजीद्वारा निर्देशित थियो । यद्यपि इतिहा...
एसपीपीबाट हट्नुको विकल्प छैन access_timeअसार ५, २०७९
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग लिने÷नलिने भन्ने विवादले नेपाली राजनीति झण्डै दुई वर्ष कच्पल्टिया । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बर्हिगमन, जेलनेलदेखि केपी शर्मा ओलीको सत्तापलट र पार्टी पतनमा एमसीसी एउटा महत्वपूर्ण फ्याक्टर थियो । भलै त्यस...
के जग्गा वर्गीकरण र धितो बन्धकबीच तालमेल छ ? access_timeअसार ५, २०७९
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै त्यसलाई ‘सहजीकरण गर्ने’ भनेर गत जेठ २७ गते बुँदागत निर्णयहरू गरेपछि जग्गा उपयोग र व्यवसायको क्षेत्रमा झन् अन्योल सिर्जना भएको छ । निर्णय लगत्तै देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले ऋ...
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रवाद access_timeअसार ५, २०७९
नेपालले छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो । यी दुवै छिमेकी देशहरूसँग समनिकटता र समदुर...
मुस्लिमका घर–व्यवसायमाथिको डोजर: भारतको हिन्दु–फासिस्ट रूपान्तरणको हतियार access_timeअसार ५, २०७९
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)द्वारा शासित राज्यहरूमा अधिकारीहरूले पछिल्ला केही महिनादेखि सरकार विरोधी प्रदर्शनमा भाग लिएको आशङ्काका भरमा मुस्लिमको घर, पसल र व्यापारिक स्थलमा बुल्डोजर चलाउन थालेका छन् । एक कमजोर लोकतन्त्र खुलमखुला...
‘...नत्र एसपीपीमा काँग्रेसले कलंकको टीकामात्र नभएर भारी नै बोक्नुपर्ने हुन्छ’ access_timeअसार ३, २०७९
नेपाल अहिले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा जान थालेको अनुभूति भइरहेको छ । किनभने कूटनीतिमा परिपक्वता र चातुर्यता नहुने हो वा त्यसमा विचार नगर्ने हो भने मुलुकलाई असजिलो पर्दै जान्छ । विश्वमा अमेरिका र चीनका बीचमा सुरुमा आर्थिक द्वन्द्व थियो, अहिले सामरिक द्वन्द्व पनि देखिन थालेक...
चुपचाप जनता, बढ्दो कालोबजारी access_timeअसार १, २०७९
हिजोआज जताततै महँगी बढेको छ । खानेतेल प्रतिलिटर रु. ४ सय भन्दामाथि पुगेको छ भने पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १८० भएको छ । सर्वसाधारण जनता महँगीले ढाड सेक्यो भनिरहेछन् । तर सरोकारवाला र आम नागरिक महँगीविरुद्ध आन्दोलन गर्न एकजुट हुन सकेको अवस्था छैन । व्यापारी, ठेकेदार,...
सार्वजनिक बिदामा बेथिति ! access_timeजेठ ३१, २०७९
जेठदेखि हप्तामा २ दिन बिदा दिएको नेपाल सरकार आफ्नो निर्णयमा एक महिना पनि टिक्न सकेन । यही असारबाट पुनः आइतबारको बिदा काटिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक बिदाको कुरा गर्नु भन्दा पहिला विश्वमा साप्ताहिक बिदा कसरी जन्मियो, यसबारे जानकारी पस्किँदै यो लेखको सुरुवात गरियो । ...
बालेन साहलाई खुल्ला पत्र : काठमाडौँबासी हुनुका गर्व र ग्लानीहरू access_timeजेठ २९, २०७९
साधारणतया आलोचनाको लागि खुल्ला पत्र लेख्ने चलन छ । तर, यो आलोचनाको उद्देश्यले लेखिएको होइन, न प्रशंसाकै लागि । अनि शीर्षकमा ‘बालेन साह’ लेखिएको भए पनि यो सबै जनप्रतिनिधिको लागि हो, काठमाडौंका मात्र होइन, नेपालभरिकै । साथै, सर्वसाधारणको लागि पनि उत्तिक...
के यौनमा महिलाको भूमिका केवल ‘मन गर्नु’ मात्र हो ? access_timeजेठ २९, २०७९
सन्दर्भमा प्रवेश गर्नु अघि एउटा चलिरहेको सन्दर्भ हेरौं, “मन मिलुन्जेल प्रेम, मन नमिले पछि बलात्कार ।” यसले पुरुषहरूलाई ठुलो सास्ती दियो । याने कि कुनै महिलाले म माथि बलात्कार भयो भनी उजुरी गरिन् भने प्रहरीको पहिलो कर्तव्य बनोस् कि त्यहाँ मन मिलेर पो यौनसम्पर्...
छुवाछूत गर्ने धार्मिक र सांस्कृतिक चेतना भत्काऊ access_timeजेठ २९, २०७९
छुवाछूत संस्कार विद्यमान भएको कारण छुवाछूत गर्नेलाई सामान्य लाग्छ । तर हजारौ वर्षदेखि भोग्दै आएकालाई यसको पीडा भयावह छ । सधैँ चहराइ रहने घाउ भएको छ । आफू मान्छे हुन नपाएको दुःख छ । विश्वव्यापी नियम, कानुन र ऐनले बराबरी भनेको हकदार बन्न नपाउँदाको अभाव खट्केको छ । म...
निरन्तर परिवर्तनतर्फ पाइला access_timeजेठ २७, २०७९
‘हरपलको खबर र विश्लेषण’को नारा तथा परिवर्तनको पक्षमा समर्पित हुने उद्देश्यका साथ ९ वर्षअघि रातोपाटी डटकम सञ्चालनमा आएको हो । अनलाइन पत्रकारिता वामे सर्दै गर्दा लुकेका र लुकाइएका खबर पस्कँदै आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर फरक बाटोबाट अघि बढ्ने अठोटका साथ रातोप...
रातोपाटी : जनपक्षीयता पहिचान access_timeजेठ २७, २०७९
‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो। यो नौ बर्षीय यात्रामा रातोपाटीले जनपक्षीय पत्रकारिता त गरेकै छ, जनपक्षीयताको पहिचान जोगाएरै अनलाइन पत्रकारिताको मूलधारमा स्थापित भएको छ। गिनेचुनेका कम्तिमा पाँच अनलाइनमध्ये रातो...